ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ တာကော်တံတား နှင့် ကွမ်လုံတံတားများကို အသစ်ပြန်လည်တည်ဆောက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောကြား | ❃ Tachileik News Agency ❃ www.tachileik.net
ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ တာကော်တံတား နှင့် ကွမ်လုံတံတားများကို အသစ်ပြန်လည်တည်ဆောက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောကြား
Writen by Tachileik News Agency 10:06:00 PM -0Comments
ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ တာကော်တံတားနှင့် ကွမ်လုံတံတားများကိုလည်း အသစ်ပြန်လည် တည်ဆောက်မည် ဖြစ်ကြောင်း ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ (၆)ရက်နေ့က နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ မိုင်းတုံမြို့နယ်ရှိ သံလွင်တံတား(တာဆန်း) တည်ဆောက်ရေး စီမံကိန်း ပန္နက်တင် အခမ်းအနား မိန့်ခွန်းတွင် ထည့်သွင်းပြောကြားသွားသည်။
ရှမ်းပြည်နယ်တွင် သံလွင်မြစ်ကို ဖြတ်သန်းတည်ဆောက်ထားသည့် တံတား (၅) စင်းရှိသည့်အနက် သက်တမ်း (၅၀)ရှိနေသည့် ကွမ်လုံတံတားနှင့် သက်တမ်း (၄၅)နှစ် ရှိနေသည့် တာကော်တံတား တို့ကိုလည်း အသစ်ပြန်လည်ပြုပြင်တည်ဆောက်ရန်ရှိနေကြောင်း နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က ထည့်သွင်း ပြောကြားသွားခြင်းဖြစ်သည်။
ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနှင့် အရှေ့ပိုင်းတို့ကိုဆက်သွယ်ထားသည့် သံလွင်တံတား(တာဆန်း) တံတားသစ်သည် (၂၆၁.၇၂၃) မီတာရှည်လျားပြီး ပင်မတံတားမီတာ (၂၀၀)၊ တံတားအကျယ် (၁၀. ၅)မီတာ၊ ကားလမ်း (၈. ၅)မီတာ၊ လူသွားလမ်း တစ်ဖက်လျှင်(၁)မီတာ၊ ရေလမ်းကင်းလွတ်အကျယ်(၂၀၀)မီတာ၊ အမြင့်(၈)မီတာရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
တံတားခံနိုင်ဝန်မှာ ယာဉ်တစ်စီးချင်း ခွင့်ပြုတန်(၇၅)တန်ရှိမည်ဖြစ်ကာ ကျပ်သန်းပေါင်း (၁၃၀၀၀) ကုန်ကျမည်ဟု ခန့်မှန်းထားခြင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါ ပန္နက်တင်အခမ်းအနားတွင် မိုင်းတုံနှင့် မိုင်းပန်မြို့နယ်များမှ ဒေသခံများအတွက် ဆန်၊ဆီ၊ဆား၊ငါးခြောက်များကိုလည်း နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က ထောက်ပံ့ပစ္စည်းများအဖြစ် ပေးအပ်ကြောင်း သိရသည်။
တံတားပန္နက်တင်အခမ်းအနားသို့ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးကျော်ဆွေ၊ နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည် ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲအောင်၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးမင်းသူ၊ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဟန်ဇော်၊ ရှမ်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာ လင်းထွဋ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဦးခွန်ရဲထွေးတို့လည်း တက်ရောက်ကြောင်း သိရသည်။
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် အဖွဲ့သည် ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်း၏ ခရီးစဉ်အဖြစ် ၂၀၁၉ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ(၅)ရက်နေ့က တာချီလိတ်၊ မိုင်းယောင်း နှင့် ကျိုင်းတုံမြို့သို့ ရောက်ရှိပြီးနောက် ဖေဖော်ဝါရီလ(၆)ရက်နေ့တွင် မိုင်းတုံ နှင့် မိုင်းဆတ်မြို့သို့ ရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်သည်။
ဓါတ်ပုံ - မြင့်မောင်
ရှမျးပွညျနယျအတှငျးရှိ တာကျောတံတားနှငျ့ ကှမျလုံတံတားမြားကိုလညျး အသဈပွနျလညျ တညျဆောကျမညျ ဖွဈကွောငျး ၂၀၁၉ ခုနှဈ၊ ဖဖေျောဝါရီလ (၆)ရကျနကေ့ နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျမှ မိုငျးတုံမွို့နယျရှိ သံလှငျတံတား(တာဆနျး) တညျဆောကျရေး စီမံကိနျး ပန်နကျတငျ အခမျးအနား မိနျ့ခှနျးတှငျ ထညျ့သှငျးပွောကွားသှားသညျ။
ရှမျးပွညျနယျတှငျ သံလှငျမွဈကို ဖွတျသနျးတညျဆောကျထားသညျ့ တံတား (၅) စငျးရှိသညျ့အနကျ သကျတမျး (၅၀)ရှိနသေညျ့ ကှမျလုံတံတားနှငျ့ သကျတမျး (၄၅)နှဈ ရှိနသေညျ့ တာကျောတံတား တို့ကိုလညျး အသဈပွနျလညျပွုပွငျတညျဆောကျရနျရှိနကွေောငျး နိုငျငံတျော၏ အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျက ထညျ့သှငျး ပွောကွားသှားခွငျးဖွဈသညျ။
ရှမျးပွညျနယျတောငျပိုငျးနှငျ့ အရှပေို့ငျးတို့ကိုဆကျသှယျထားသညျ့ သံလှငျတံတား(တာဆနျး) တံတားသဈသညျ (၂၆၁.၇၂၃) မီတာရှညျလြားပွီး ပငျမတံတားမီတာ (၂၀၀)၊ တံတားအကယျြ (၁၀. ၅)မီတာ၊ ကားလမျး (၈. ၅)မီတာ၊ လူသှားလမျး တဈဖကျလြှငျ(၁)မီတာ၊ ရလေမျးကငျးလှတျအကယျြ(၂၀၀)မီတာ၊ အမွငျ့(၈)မီတာရှိမညျဖွဈကွောငျး သိရသညျ။
တံတားခံနိုငျဝနျမှာ ယာဉျတဈစီးခငျြး ခှငျ့ပွုတနျ(၇၅)တနျရှိမညျဖွဈကာ ကပျြသနျးပေါငျး (၁၃၀၀၀) ကုနျကမြညျဟု ခနျ့မှနျးထားခွငျးဖွဈသညျ။
အဆိုပါ ပန်နကျတငျအခမျးအနားတှငျ မိုငျးတုံနှငျ့ မိုငျးပနျမွို့နယျမြားမှ ဒသေခံမြားအတှကျ ဆနျ၊ဆီ၊ဆား၊ငါးခွောကျမြားကိုလညျး နိုငျငံတျောအတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျက ထောကျပံ့ပစ်စညျးမြားအဖွဈ ပေးအပျကွောငျး သိရသညျ။
တံတားပန်နကျတငျအခမျးအနားသို့ နိုငျငံတျော၏ အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ၊ ပွညျထဲရေးဝနျကွီးဌာန၊ ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဒုတိယဗိုလျခြုပျကွီးကြျောဆှေ၊ နယျစပျရေးရာဝနျကွီးဌာန၊ ပွညျ ထောငျစုဝနျကွီး ဒုတိယဗိုလျခြုပျကွီးရဲအောငျ၊ ပွညျထောငျစုအစိုးရအဖှဲ့ရုံးဝနျကွီးဌာန၊ ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဦးမငျးသူ၊ ဆောကျလုပျရေးဝနျကွီးဌာန၊ ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဦးဟနျဇျော၊ ရှမျးပွညျနယျဝနျကွီးခြုပျ ဒေါကျတာ လငျးထှဋျ၊ ရှမျးပွညျနယျလမျးပနျးဆကျသှယျရေးဝနျကွီး ဦးခှနျရဲထှေးတို့လညျး တကျရောကျကွောငျး သိရသညျ။
နိုငျငံတျော၏ အတိုငျပငျခံ ပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ နှငျ့ အဖှဲ့သညျ ရှမျးပွညျနယျအရှပေို့ငျး၏ ခရီးစဉျအဖွဈ ၂၀၁၉ခုနှဈ ဖဖေျောဝါရီလ(၅)ရကျနကေ့ တာခြီလိတျ၊ မိုငျးယောငျး နှငျ့ ကြိုငျးတုံမွို့သို့ ရောကျရှိပွီးနောကျ ဖဖေျောဝါရီလ(၆)ရကျနတှေ့ငျ မိုငျးတုံ နှငျ့ မိုငျးဆတျမွို့သို့ ရောကျရှိလာခွငျးဖွဈသညျ။
ဓာတျပုံ - မွငျ့မောငျ